‘भ्रमण पुराना समझदारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित हुनेछ’
“गुणस्तर ठिक, सुरक्षा उपकरण अव्यवस्थित”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमण (भदौ ७–११ गते) को क्रममा यतिबेला नयाँदिल्लीमा हुनुहुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतसित द्विपक्षीय सम्बन्धका अनेक आयाम अबिरल रूपमा आदिकालदेखि नै गतिशील छन् । यदाकदा आउने कतिपय समस्या उच्च राजनीतिक तहबाटै निरूपण हुँदै जाने ऐतिहासिक परम्परा छ । बाढीको प्रकोप तथा सीमामा डुबानको समस्या ताजै रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले त्यस्ता कतिपय मामिलाको दीर्घकालीन समाधानको उच्च अपेक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको नयाँदिल्ली भ्रमण सफल बनाउन भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले निकै मिहिनेत गरिरहनुभएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाम, अवसर र चुनौतीलगायतका परिवेशमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई मुख्य विषयवस्तु बनाउँदै राजदूत उपाध्यायसँग गोरखापत्रका प्रमुख समाचारदाता जुनारबाबु बस्नेतले लिनुभएको अन्तर्वार्ता :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजकीय भ्रमण अहिले नयाँदिल्लीमा हुनुहुन्छ । यो भ्रमणका तयारीका लागि यहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको कुन चरणमा यो भ्रमण हुँदै छ ? सविस्तार गरिदिनुहुन्छ कि ?
यो भ्रमणको तयारी दुवैतर्फबाट भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा कसै एकजनाले तयारी गर्ने होइन । देशको प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणको सफलताका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, गर्नुभएको छ । यो प्रयास सराहनीय छ । नेपाल र भारतबीच हुने उच्च तहको यस प्रकारको भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र प्रगाढ बनाउने छ । नेपाल र भारत सदीयौँदेखि दुई असल छिमेकी मुुलुक हुन् । पारस्परिक सहयोगात्मक सम्बन्ध छ । यस्ता भ्रमणले पारस्परिक सम्बन्धका नयाँ आयाम पनि थप्ने छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका आयाम के कस्ता रहेको छन् ? यो भ्रमणले ती आयामलाई के कसरी नयाँ दिशा दिने छ ?
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका व्यापक आयाम रहेका छन् । हाम्रा सम्बन्धमा भूगोलको महŒव छ । इतिहासको आफ्नै विशिष्टता छ । इतिहासको लामो परम्परा छ । आपसमा मिल्दो संस्कृति छ । धर्म र परम्पराले दुवै देशका जनतालाई जोडेको छ । अतः हाम्रा सम्बन्ध भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, धर्म र परम्पराले निर्देशित गरेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो चौथो राजकीय भ्रमण भएकोले विगतका समझदारी, तिनको कार्यान्वयन गतिलाई तीव्रता दिन बल पुग्ने छ । विगतका समझदारी र तिनको कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा ठूलो गति दिन सक्ने छ । यतिमात्र होइन, नेपालमा दिगो शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा यो भ्रमणले नयाँ आयाम थप्ने छ ।
मूलतः यो भ्रमणका प्रमुख कार्यसूची के कस्ता रहेका छन् ? नयाँ विषयवस्तुभन्दा पुरानै समझदारीलगायतका विषय मात्रै यो भ्रमण केन्द्रित हुने कुरा आइरहेको छ । यथार्थ के भइरहेको छ ?
नेपाल र भारतबीच विगतमा धेरै समझदारी भएका छन् । सूची धेरै लामो हुन सक्छन् तर तिनको कार्यान्वयनका अवस्था धेरै जसोको विचारणीय छ । त्यसैले हामीले समझदारीका सङ्ख्या मात्र बढाउनेतिर यो भ्रमणले प्रयास गर्ने छैन । समझदारीका सङ्ख्या बढाउने र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राम्रो पनि देखिएको छैन र देखिँदैन पनि तर पनि केही समझदारी यो पटक पनि हुनेछन् । तयारी भएको छ । यद्यपि, मूलभूत रूपमा यो भ्रमण पुराना समझदारी कार्यान्वन गर्न केन्द्रित हुँदै छ । यसो भनेर भ्रमण त्यतिमा मात्र सीमित हुने पक्कै होइन । जनस्तरमा प्रष्ट देखिने गरी लाभ पुग्ने केही पूर्वाधारका योजना अगाडि बढाउने बारेमा राजनीतिको उच्च नेतृत्व तहमा सकारात्मक सोच र वातावरण बनेको छ । त्यो मैले देखेको छु । त्यस्तो सोच र वातावरण यो भ्रमणको महŒवपूर्ण आयाम हुने छ ।
नेपालमा रोजगारी विस्तारका लागि लगानी महŒवपूर्ण पाटो हो । बाह्य लगानी आउन सक्ने वातावरण कसरी विकास गर्न सकिएला ? लगानी विस्तारका लागि के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? यो भ्रमणले त्यसतर्फ केही नयाँ काम थालनी गर्ने छ ?
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपालमा आएको नयाँ परिवर्तनको सन्दर्भमा भएको छ । नेपाल लामो समय विद्युत् अभावमा बस्यो र अहिले पनि भारतबाट केही बिजुली लग्नुपरिरहेको छ तर अवस्थामा सुधार आउँदै छ । नेपाल अहिले विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) मुक्त भएको छ । चाँडै नेपालको आन्तरिक बिजुली उत्पादन पर्याप्त हुन्छ । एक÷डेढ वर्षमा ऊर्जा प्रचुर हुन्छ । लगानी गर्न आउनेलाई ऊर्जाको पर्याप्तता महŒवपूर्ण पक्ष हो । ऊर्जा पर्याप्त हुँदा लगानीको वातावरण राम्रो बन्छ, बन्दै छ । बिजुलीमात्र होइन, हामीले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्दैछौँ । औद्योगिक क्षेत्रले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । सुरक्षाको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ । त्यसैले उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने बिजुली, जमिन, सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने वातावरण बनेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि केही ऐन, नियम पनि संशोधन हुँदैछ । यो अवस्थामा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यहाँका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने छ । विश्वास बढाउने छ ।
यो भ्रमणमा नयाँ विषय केही नहुने पनि कुरा उठिरहेको देखिएको छ । कतिपयले आशङ्का पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । खासमा के कस्तो हो ?
प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्ली आउनु अगाडि अन्तिम समयसम्म पनि सबै पक्षसित व्यापक परामर्श गर्नुभएको छ, तयारी गर्नुभएको छ । यस्ता भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर पारिस्परिक लाभका क्षेत्रको खोजी गर्ने पनि हो । कसैले आशङ्का गर्नु पर्दैन । राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै विवादास्पद काम कुरा यो भ्रमणमा हुने छैन ।
नेपाल–भारतबीच अविश्वास रहेको पनि कुरा उठिरहन्छ । विगतको सीमा नाकाबन्दीका कुरा पनि उठिरहन्छ ? अविश्वास निराकरण गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र उचाइमा पु¥याउन के कस्ता प्रयास हुने छन् ?
नेपाल र भारतबीच समाधान नै नहुने कुनै पनि समस्या छैनन् । हाम्रो यति बढी संलग्नता छ कि बेला–बेलामा समस्या आउने गर्छन् । समस्या आउनेमात्र होइन, तिनको निराकरण पनि हुने गरेको छ । विगतबाट पाठ सिकेर हामीले दुवै राष्ट्र र जनतालाई फाइदा पुग्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । त्यस्ता काम समयसीमा नै तोक्नुपर्छ । समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानको प्रक्रिया पनि आरम्भ भइसकेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ । उच्च तहका द्विपक्षीय भ्रमणले यी आयामलाई थप बल पु¥याउने छ ।
नेपाल संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लगातारको निर्वाचन अभियानमा छ । नयाँ संविधान (२०७२) प्रति भारतका केही गुनासा छन् भन्ने गरिन्छ । यसमा नयाँदिल्लीको धारणा खासमा के कस्तो हो ? स्पष्ट गरिदिनु हुन्छ ?
प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट नै कमी कमजोरी स्वतःस्फुत सुधारिँदै जाने भएकोले मित्र राष्ट्र भारत सरकारको कुनै पनि निर्वाचनमा विमति रहेन, हुन पनि सक्दैन । नेपालमा स्थायी शान्ति र आर्थिक समृद्धि नै भारतको मूल चाहना हो । आफ्नो देशको राजनीतिक व्यवस्थापन हामी आफैँले गर्ने हो ।
भर्खरै नेपालको तराई–मधेश क्षेत्र बाढी र डुबानको चपेटमा प¥यो । त्यसक्रममा भारत सरकारले सिमानमा भारतको तर्फबाट बनाएका बाँध पनि डुबानको प्रमुख कारणका रूपमा लिइयो, लिइँदै छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिने छ ?
नेपालको तराई–मधेश र खासगरी भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष बाढीले जनधनको व्यापक क्षति हुने गरेको छ । नेपालबाट आउने नदीहरूको समुचित सुप्रवद्र्धन गर्न नसकेर दुवै देशलाई नदी अभिशाप भएको छ । उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी संयुक्त प्रयासले समुचित प्रबन्ध गर्न सकेमा हाम्रा नदी दुवै देशका जनताका लागि वरदान बन्नेछ । यसका लागि इच्चा शक्ति देखाउने समय आएको छ ।
सार्वभौम देशको सहमति बेगर पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध हुने गरी सीमामा कुनै संरचना बनाउन हुँदैन थियो । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सैद्धान्तिक निर्णयमात्र होइन, कार्यान्वयनमा जाने बारेमा उच्च तहको ध्यानाकर्षण भएको अनुभव गरेको छु ।
नेपाल–भारतबीच व्यापार घाटा बर्सेनि बढेर गएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कदमको जरुरी पर्छ ? अलि विस्तारमा भनिदिनुहुन्छ कि ?
नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण माल वस्तु भारतीय बजारमा निर्वाध प्रवेशका लागि एकीकृत जाँच, चौकी र सुखा बन्दरगाह रक्सौल र वीरगन्जमा बनेर तयार हुँदैछ । विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगरमा थप पूर्वाधार बनाउने योजना छ । त्यहाँ पूर्वाधार बन्न केही वर्ष लाग्छ । पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म नेपाली उत्पादन निर्वाध प्रवेशका लागि पहल भइरहेको छ । यो भ्रमणले त्यसमा थप पहल गर्ने छ ।
कहिले अदुवा, छाला, जुटजस्ता कृषिजन्य वस्तुका पनि अवरोध हुने र पछि हट्ने प्रक्रिया जारी नै छ । यस्ता बेला–बेलामा आउने समस्याले नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा पु¥याउन समस्या भएको देखिएको छ । नेपालको व्यापार बढाउन यो अवरोध नै हो । यसलाई सधैँका लागि निराकरण गर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । जलविद्युत्, पर्यटनका क्षेत्रमा भइरहेको सुधारले पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपालको प्रमुख प्राथमिकता के कस्ता रहेका छन् ? सारमा केही थप्नुहुन्छ कि ?
नेपालको सन्दर्भमा निर्यातजन्य औद्योगीकरण जरुरी छ । लगानी प्रवद्र्धन पनि त्यसै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यो नेपालको प्रयास पनि हो । निर्यातयोग्य वस्तु व्यवसाय हाम्रा प्राथमिकतामा पर्छ । अरूले गरेरमात्रै पनि हुँदैन । प्रयास हाम्रै चाहिन्छ । सडक विस्तारले निर्यात व्यापारलाई सहज बनाउँछ । सडकसँगै रेल यातायातको विस्तारले व्यापारमा सहजीकरण ल्याउँछ, अवरोध हटाउँछ । अतः सडक, रेल, हवाई यातायातको समुचित विस्तारले पनि व्यापार प्रवद्र्धन गरी मौजुदा व्यापार घाटा न्यून गर्न सहयोग हुनेछ । त्यस दिशातर्फ पनि यो भ्रमण महŒवपूर्ण हुने छ ।
प्रकाशित मिति: २०७४/५/८